आक्रामक नारायणको आगमन | Hamro Khelkud
आक्रामक नारायणको आगमन
युवा अलराउन्डर नारायण जोशी थोरै अवसरमा धेरै आशा र सम्भावना देखाएका युवा अलराउन्डर हुन् । गत साता सम्पन्न एभरेष्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) मा ललितपुर प्याट्रीयट्सका लागि खेल्दै नारायणले नेपाली क्रिकेटमा आक्रामक ब्याटिङबाट आफूलाई चिनाए । तर नारायणको परिचय त्यतिमै सिमित छैन ।
नेपाल ओडिआई मान्यता भएको देश हो । तर नेपालको घरेलु संचना, ग्रास रुट र उमेर समूह त्यो स्तरको भन्न लाज मान्नुपर्ने अवस्था छ । पछिल्लो ७–८ वर्षदेखि उमेर समूह झारा टार्ने छ । ट्यालेन्ट हन्ट, एकेडेमी र फ्रेन्चाइज लिगकै आधारमा नेपाली ग्रास रुट र उमेर समूह चलेको छ । त्यसैले थुप्रै प्रतिभावान् युवा खेलाडी आफ्नो क्षमता देखाउन नपाउँदा हराएर गएका छन् । आउन पर्ने र नेपालले खोजेको जस्तो युवा खेलाडी पाउन सकेको छैन । अझ नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को निलम्बन र कोरोना महामारीले ठूलो नोक्सानी पुर्यायो । यी सबै बाधा पन्छाउँदै अघि बढ्न सफल थोरै केहि युवा खेलाडीमध्य नारायण पनि एक हुन् ।
इपिएलमा ललितपुर लिग चरणबाटै बाहिरियो । टोलीको कमजोर नतिजाका बीच पाएको थोरै अवसरमा नारायणले धेरै सिद्ध गरे । नेपाली यू१६ टोलीको प्रतिनिधित्व गरिसकेका नारायणले पछिल्ला दुई घरेलु क्रिकेट प्रतियोगितामा आक्रामक ब्याटिङ गर्दै धेरैको मन जिते र ध्यान केन्द्रित गरे । नारायण नयाँ पुस्ताका ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ तीनै क्षेत्रमा अब्बल प्रदर्शन गर्न सक्ने युवा खेलाडी हुन् । उमेर समूहमा तीव्र गतिको बलिङमा उत्कृष्ट छाप छोडेका नारायणले विष्फोटक ब्याटिङका साथ नेपाली क्रिकेटमा नयाँ आशा र उत्साह थपेका छन् ।
इपिएलमा नारायणले बलिङको अवसर पाएनन् । तर ब्याटिङमा पाएको अवसरमा भने चुकेनन् । इपिएलमा विष्फोटक ब्याटिङ निकै कम खेलाडीले गरे । त्यसमा पनि विदेशी खेलाडीकै बाहुल्यता थियो । काठमाडौंविरुद्ध १९ औं ओभरको दोस्रो बलमा राशिद खान आउट भएपछि मैदान छिरेका नारायणले २० औं ओभरको पहिलो बलमै तीव्र गतिका बलर गुलशन झालाई चौका साथ आफ्नो इपिएल सुरुवात गरेका थिए ।
दोस्रो र तेस्रो बलमा नारायणले लगातार चौका प्रहार गरेका थिए । चौथो बलमा ठूलो सट खेल्नेक्रममा कभरमा शाहिद अफ्रिदीबाट समातिन पुगे । ४ बल खेलेका उनले ३ चौका सहित १२ रन बनाएका थिए । अन्तिम समयमा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले नखेल्ने भनेपछि समस्या र चिन्तामा अलमलिएको ललितपुरलाई नारायणले आक्रामक ब्याटिङले साथ पहिलो खेलमा केहि आशा देखाएका थिए ।
वर्षाको कारण पोखरासँग ७ ओभरको खेल भएको थियो । छैटौं ओभरमा ब्याटिङमा आएका नारायणले वेस्टइन्डिजका तीव्र गतिका बलर केज्रिक विलियम्सलाई छक्का प्रहार गरे । उक्त खेलमा नारायणले ५ बलमा १ चौका र १ छक्का सहित ११ रन बनाए । विराटनगर वारियर्सविरुद्ध ललितपुरले इपिएल इतिहासकै सर्वाधिक २ सय २६ रन बनायो । इतिहास रच्नमा नारायणको विष्फोटक ब्याटिङ निकै महत्वपूर्ण थियो । उनले ४ बलमा ३ छक्का सहित १८ रन बनाउँदै कीर्तिमानी योगफलमा पुर्याएका थिए ।
उनले २० औं ओभरमा रामनरेश गिरीमाथि छक्काको ह्याट्रिकनै गरे । दुर्भाग्यपूर्ण त्यसै खेलको दोस्रो इनिङमा फिल्डिङ गर्नेक्रममा तेस्रो ओभरको पाँचौं बलमा सन्दीप जोरासँग ठोकिँदा घाइते भएपछि हस्पिटलनै जानु पर्यो । एकदिन आइसीयूमै राखेर उपचार गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि बाँकी खेल खेलेनन् ।
नारायणले इपिएलमा कम अवसर पाए । तर त्यसको भरपुर फाइदा उठाए । सट छनोट सानदार र आत्माविश्वासी थिए । नारायणले ४ खेलमा कुल १३ बल खेल्दा ३१५.३८ को स्ट्राइक रेटमा ४ चौका र ४ छक्का सहित ४१ रन बनाए । तथ्यांक हेर्दा यो धेरै नलाग्ला, तर उनले पाएको कमै अवसरलाई सकारात्मक रुपमा प्रयोग गरे । स्वदेशी तथा विदेशी स्टार खेलाडी पनि फिसिङमा चुक्दै आएका छन् । दबाबमा ठूला सट खेलेको नेपाली ब्याटरले कमै देखिन्छ । तर नारायणले कठिन अवस्थामै खुलेर सानदार प्रदर्शन गरे ।
नारायणले इपिएलमात्र होईन यू१६ र प्रधानमन्त्रीकपमा पनि विष्फोटक ब्याटिङ, तीव्र गतिको बलिङ र फिल्डिङमा आफ्नो कौशल देखाइसकेका छन् । टिमको रणनीतिको कारण इपिएलमा बलिङ भूमिकामा देखिएनन् । ‘म यस्तै खेलहरुको पर्खाईमा थिए । किनकी मैले आफूलाई देखाउने राम्रो अवसर पाएको छैन । पिएमकप मेरो पहिलो राष्ट्रिय खेल थियो । तयारी राम्रो गर्दै आएको थिए । म आफ्नो क्षमतालाई लिएर आत्माविश्वासी थिए’, उनले भने ।
‘पिएमकपपछि ६–७ महिना राम्रो अभ्यास गरे । मौका पाएभने सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचमा थिए । टिमले मलाई फिनिसिङ भूमिका दिएको थियो । पाएको धेरै थोरै अवसरलाई भरपूर्ण फाइदा उठाउँदै राम्रो अन्त्य गर्ने थियो । सायद टिमले मलाई दिएको भूमिका पूरा गरेजस्तो लाग्छ’, उनले भने, ‘अन्तिममा ब्याटिङ गर्दा कुनै विकल्प हुँदैन । जतिसक्यो राम्रो अन्त्य गर्ने हुन्छ ।’
पिएमकप होस् वा इपिएल उनको टोली तुलनात्मक रुपमा कमजोर रह्यो । विकेट लगातार गुमिरहेको थियो । शीर्ष र मध्यक्रमका ब्याटर चल्न नसक्दा तल्लोक्रमका खेलाडीलाई पनि असर पर्ने गर्दछ । तर नारायण आफ्नो रेन्जको बल पाए जस्तो सुकै अवस्थामा पनि हान्न सक्ने बताउँछन् ।
उच्च लय र आत्माविश्वासमा देखिएपनि तीन चार बल भन्दा बढी खेल्न पाएनन् । ललितपुरका कप्तान कुशल भुर्तेलले उनको भूमिका त्यसै अनुसार भएको हुँदा माथि मौका नदिएको बताएका थिए । ‘ब्याटिङ गर्दा जति लामो खेल्न पाइयो त्यतिनै राम्रो हुन्छ । आफूलाई त लाग्छ छिटो ब्याटिङ आएर अन्तिमसम्म खेल्न पाइयोस । इपिएलमा भूमिका अनुसार ब्याटिङ आएको थियो त्यसैमा खुसी थिए । यो सिजनमा पाएको अवसरलाई सदुपयोग गरे । तर मैले गर्न भने धेरै बाँकी छ’, ब्याटिङ बारे उनले भने ।
को हुन नारायण ?
नारायणको जन्म कैलालीको जोशीपूरमा वुवा टेकराज र आमा मायादेवी कोखबाट कान्छो सन्तानको रुपमा २०५९ माघ १६ गते भएको थियो । उनका एक दाइ (डम्बर) र दुई दिदीहरु (गीता र भगवती) छन् । नारायणको पुख्यौली घर डोटी हो । डोटीबाट २०५० सालतिर परिवार कैलाली बसाई सरेको थियो ।
नारायण पाँच वर्ष सम्म जोशीपूरमै हुर्किए । त्यसपछि उनको परिवार धनगढी तारानगरमा बसाई सर्यो । १२/१३ वर्ष उमेर सम्म उनलाई क्रिकेटमा खासै रुचि थिएन । कहिले काहिँ घर बाहिर रोडमा अरुले खेलेको हेर्ने र फाट्टफुट्ट खेल्ने गर्दथे । धनगढीको क्रिकेट माहोलबाट अछुतो हुने सकेनन् । एकदिन खेतमा खेल्ने बेलामा उनले ४० रन जति हानेर खेल जिताएछन् । त्यसपछि उनलाई सबैले खेल्न बोलाउन र लिन आउथें रे । विस्तारै क्रिकेटतर्फ यसरीनै आर्कषित हुन थाले ।
नारायणको घर नजिकै खोला बगर र जंगल थियो । वर्षायाममा खोला बढ्ने हुँदा जंगलको खाली ठाउँमा क्रिकेट खेल्थे । अरु समयमा बगरमा । नारायणका बाल्यकालका साथी थिए युवा स्टार लोकेश बम । नारायण र लोकेशको घर एकै ठाउँमा थियो । उनलाई हरेक दिन खेल्न बोलाउन र लिन लोकेश आउथें । साइकलमा खोला तर्दै कहिले बगरमा त जंगलको बीचबीचमा टेनिस बलले नथाक्न सम्म क्रिकेट खेलेर फर्किन्थे । उनलाई राम्रोसँग ब्याट चलाउन र समाउन लोकेशलेनै सिकाएका थिए । खोला बगर, जंगल खाली ठाउँ होस् वा बाटोमा उनीहरुसँगै क्रिकेट खेलेर हुर्किए । त्यसरीनै नारायणले क्रिकेट खेल्न सिके ।
नारायणलाई घर परिवारबाट क्रिकेट खेल्दा कुनै रोक छेक थिएन । उनीअघि उनको परिवार र आफन्तमा खेलकुदमा कोहीपनि लागेका थिएनन् । त्यसैले सबैले उनलाई क्रिकेटमा खेल्न दिनुपर्छ भन्ने गर्दथे । ऐश्वर्य विद्या निकेतनबाट कक्षा १० पास गरेका थिए । उनले कक्षा ८ मा पहिलो पटक लेदर बल (ड्युज) खेलेका थिए । अन्डर ८ कक्षा प्रतियोगितामा उत्कृष्ट फिल्डिरको अवार्ड नारायणलेनै पाएका थिए । कक्षा १० मा उनकै कप्तानीमा विद्यालयले प्रतियोगिता खेलेको थियो ।
नारायणको कप्तानीमा स्कुलले दुवै उपाधि मात्र जितेन, नारायण उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ प्लेयर अफ द सिरिज चुनिएका थिए । त्यस प्रतियोगितामा राम्रो खेल्ने ११ खेलाडी ड्रिम इलेभेनमा पर्थे । नारायण पनि ड्रिम इलेभेनमा परे । उक्त ड्रिम इलेभेनले धनगढी क्रिकेट एकेडेमी (डिसिए) सँग तीन खेल खेलेको थियो । त्यहाँ पनि नारायणको प्रदर्शन सानदार रह्यो । डिसिएले उक्त तीन खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने ड्रिम इलेभेनका पाँच खेलाडीलाई एकेडेमीमा निशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्यो । छात्रवृत्रिसँगै नारायण पहिलो पटक एकेडेमी गए ।
नारायण, लोकेश बम, विपिन रावल लगायतका युवा क्रिकेटरले डिसिएमा सँगै अभ्यास गर्थे । एकेडेमी जान थालेपछि अव क्रिकेटनै खेल्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएका थिए । एकेडेमीमा खेल्न थालेको केहि महिनापछि काठमाडौंमा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड यू१६ प्रतियोगिता भयो । सुदूरपश्चिमको नेतृत्व नारायणले गरेका थिए । क्षेत्रनम्बर पाँचविरुद्ध उनले १७ बलमा ४२ रनको आक्रामक इनिङ खेलेका थिए ।
त्यसपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) आइसिसीको निलम्बनमा पर्यो । सन् २०१७ मा थाईल्यान्डमा हुने प्रतियोगिताको लागि यू१६ छनोट प्रतियोगिता हुँदै परेका थिए । उनले अभ्यासको पहिलो दिननै सानदार प्रदर्शन गरे । बन्द प्रशिक्षणमा सानदार प्रदर्शनका साथ टिममा परेका थिए । त्यो समय हरेक क्षेत्रबाट ४–४ जना खेलाडी प्रशिक्षणमा बोलाइन्थ्यो ।
नारायणले डिसेम्बरमा थाईल्यान्डमा भएको प्रतियोगितामा सानदार प्रदर्शन गरे । डेब्यू खेलमै थाईल्यान्डविरुद्ध ७ ओभरमा १७ रन खर्चेर ५ विकेट लिएका थिए । तीव्र गतिका बलर उनले शीर्षक्रमका चार खेलाडीलाई बोल्ड आउट गरेका थिए । रितको कप्तानीमा, कुशल मल्ल, सूर्य तामाङ, विशाल विक्रम केसी, प्रतिश जि.सी लगायतका खेलाडीहरु थिए । यी सबैले यू१९ बाट खेल्दा नारायण ब्याक इन्जुरीको कारण त्यो अवसर पाएनन् ।
म्यानमारविरुद्ध नारायणले ३ ओभरमा २ मेडन सहित १ रन खर्चेर ४ विकेट लिएका थिए । तीन खेलाडी बोल्ड र एक खेलाडी एलबीडब्लू धरापमा परेका थिए । नेपालले ११.३ ओभरमा म्यानमारलाई १३ रनमा अल आउट गर्दै ३ सय ३७ रनको फराकिलो जित हात पारेको थियो । कप्तान रित गौतमले १ सय ६ रनको शतकीय इनिङमा नेपालले निर्धारित ३५ ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै ३ सय ५० रन जोडेको थियो ।
नेपालले फाइनलमा मलेसियालाई ७१ रनले पराजित गर्दै उपाधि जितेको थियो ।
नारायण २३ बलमा ५ चौका र १ छक्का सहित ४६ रनमा अविजित रहेका थिए । नारायण ५ खेलमा ११ विकेट लिँदै प्रतियोगिताकै सर्वाधिक विकेट लिने सूचिमा दोस्रो स्थानमा थिए । त्यसपछि उक्त यू१६ खेलेका सबैजना यू१९ को बन्द प्रशिक्षणमा परे । भारतको लखनहुमा हुने नेपाल, भारत र अफगानिस्तानबीचको प्रतियोगिताका लागि टियु मैदानमा प्रशिक्षणमा नारायणले सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपनि टोलीमा परेनन् । कमलसिंह ऐरी, राशिद खान, नन्दन यादव जस्ता सिनियर खेलाडीको छायाँमा परेका थिए ।
त्यसपछि डिसिएमा नेपाली क्रिकेट टोलीका पूर्व क्रिकेटर दीपेन्द्र चौधरी प्रशिक्षकको रुपमा आए । दीपेन्द्रको प्रशिक्षकमा नारायणले अझ निखारिदै गए । दोस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग (डिपिएल) २०१८ मा विनोद दासकै प्रशिक्षकमा महेन्द्रनगर युनाइटेडले उनलाई ट्यालेन्ट हन्टमार्फत छनोट गरेको थियो । तर उनले खेल्न अवसर भने पाएनन् । खेल्न नपाएपनि अनुवभ धेरै पाएको बताउँछन् ।
२०१८ मा ललितपुरलेले अनुबन्ध गरेको थियो । ललितपुर च्याम्पियननै बन्यो । खेल्न नपाएपनि उनले राम्रो भरपुर फाइदा उठाए ।
उनी २०१९ मा नोभेम्बरमा भारतमा भएको यू१९ च्यालेन्जर ट्रफीमा नेपाली यू१९ टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा परेका थिए । तर बन्द प्रशिक्षणको क्रममा ब्याक इन्जुरी (चोट) को कारण गुमाएका थिए । त्यसपछि उनले ६ महिना जति बलिङनै गरेनन् । त्यसपछि लयमा फर्किन उनलाई केहि समय लागेको थियो ।
यू१९ मा राम्रो गरेको थिए ।
नेपाली टोलीको जर्सी लगाउने सपना कसलाई हुँदैन र ? तर चोट पुन बाधक बन्यो । नारायणको लागि यो हालसम्म नराम्रो अनुभव हो । यू १९ खेल्ने उत्सुकता थियो । तर चोटको कारण गुमाउने भएपछि उनी धेरै रोएका थिए । त्यसपछि २०२० को सुरुवातमै कोरोना महामारीको कारण एक वर्षभन्दा बढी क्रिकेट ठप्पनै भयो ।
पिएमकपमा बागमतीविरुद्ध त्यो प्रदर्शन
माघमा भएको प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट नारायणले बागमतीविरुद्ध राष्ट्रिय प्रतियोगिता डेब्यूका साथ नवौं नम्बरमा ब्याटिङ गर्दै २९ बलमा १ चौका र ५ छक्का सहित ४४ रनमा अविजित थिए । बागमतीविरुद्ध ३ सय रनको विजयी लक्ष्य पछ्याउनेक्रममा नन्दन यादवले १५ औं ओभरको चौथो बलमा शेर मल्ललाई आउट गरेपछि उनी क्रिजमा आएका थिए ।
६३–७ को अवस्थामा क्रिजमा आएका उनले पहिलो बलमै चौका प्रहार इनिङ सुरुवात गरेका थिए । त्यो दबाबमा उनले आत्माविश्वासी र परिपक्कता ब्याटिङ गरे । तर भोजराज भट्ट रन आउट भएपछि अर्धशतक बनाउनबाट चुकेका थिए । टोली १ सय ८० रनको फराकिलो अन्तरले पराजित भएपनि नारायणले धेरैको मन जितेका थिए । केहि समय सानदार छक्का प्रहार गर्दै खेललाई रोमान्चक बनाएका थिए ।
त्यसै खेलमा बलिङमा नारायणले ३ विकेट लिएका थिए । ईशान पाण्डे, ज्ञानेन्द्र मल्ल र विपिन आचार्यलाई आउट गरेका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशविरुद्ध नारायणले २२ बलमा १ चौका र १ छक्का सहित १७ रन बनाएका थिए । उनी काठमाडौं मेयर्स कपमा काठमाडौं मेयर ११ बाट खेलेका थिए । प्रदर्शन औसत रहेको थियो । नारायण घरमा आमा बुबा, लोकेश, सुबास शाही (डिसिए तथा डिपिएल प्रमुख), दीपेन्द्र चौधरी लगायतको साथ, सहयोग र प्रेरणा धेरै रहेको बताउँछन् ।
नारायणले नेपाली टोलीबाट मात्र खेल्ने सपना देखेका छैनन् । नेपाली क्रिकेटमा आफ्नो भिन्दै पहिचान बनाउने सपना देखेका छन् । ‘नेपालको लागि खेल्ने सपना त क्रिकेट खेल्न सुरुवात गरेदेखि हो । नेपाली टोलीबाट खेल्नुमात्र होईन एउटा राम्रो छाप छाड्ने सपना छ । देशका लागि खेल्नलाई अझ राम्रो गर्नुपर्छ’, आफ्नो सपना बारे उनले भने ।
‘अभ्यास मात्र गरेर हुँदैन । आत्माविश्वास बढाउन र माथि जानलाई आफ्नो खेल चाहिन्छ । यू१६ देखि सुरु गर्दा क्यान निलम्बित थियो । त्यसपछि यू१९ खेल्ने समयमा कोरोना । जसको कारण धेरै गाह्रो भयो’, उनले भने ।
नेपालमा उनलाई पारस खड्कापछि दीपेन्द्र सिंह ऐरी उनलाई मनपर्ने खेलाडी हुन् । विदेशी खेलाडीमा इंग्ल्यान्डका तीव्र गतिका बलर जेम्श एन्डरसन, दक्षिण अफ्रिका विष्फोटक ब्याटर एवि डिभिलियर्स र भारतीय अलराउन्डर हार्दिक पान्ड्या मनपर्छ ।
इपिएलमा त्यो अविश्वसनिय घटना
विराटनगर वारियर्सविरुद्ध नारायण तेस्रो ओभरको पाँचौं बलमा सन्दीप जोरासँग ठोकिन पुग्दा नाकमा चोट पुगेको थियो । त्यसपछि एकै छिनमै उनी मैदानमै अचेत अवस्थामा लडेका थिए । स्टार अस्पतालमा एकदिन आइसियुमा राखेर उपचार गरिएको थियो । ‘मैले कल्प्तना गरेको थिइनँ । मलाई याद पनि भएन । त्यो कुरा अझैपनि याद आउँदैन । एकछिनको लागि म अचेत भएको रहेछु । अहिले भिडियो फुटेज हेर्दा आफूलाई डर लाग्छ । धन्न घाँटी भाचिएको रहेनछ । सबैले घाँटी भाचिएको सोच्नुभएको रहेछ । धन्न ठूलो चोट केहि पनि भएन’, उक्त घटना सम्झंदै नारायणले भने ।
नारायणको अवको यात्रा निरन्तर शीर्ष श्रेणी क्रिकेट खेल्दै राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्नु हो । नेपालमा अब कुन खेल र प्रतियोगिता हुन्छ कुनै तालिका छैन । दशैं पछि यू१९ राष्ट्रिय प्रतियोगिता चर्चा छ । उक्त प्रतियोगिता भएमा सुदूरपश्चिमबाट खेल्नेछन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कप हुनेछ । अन्य लिग र प्रतियोगिता भन्न सक्ने अवस्था छैन । तालिका अनुसार नेपालले अव २०२२ मानै अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज र प्रतियोगिता खेल्नेछ । आगमी वर्ष टि२० ग्लोबल छनोट हुँदा यो वर्ष टि२० राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्नै पर्ने हुन्छ ।
नेपालको अवको मुख्य लक्ष्य आगमी वर्ष टि२० विश्वकप ग्लोबल छनोटमा उत्कृष्ट प्रदर्शनका साथ भारतमा हुने विश्वकपमा स्थान बनाउने हो । विश्वकपमा पुग्न नेपालले नारायण जस्ता युवा हार्ड हिटर अलराउन्डरलाई समयमै तयार पार्नतर्फ ध्यानदिन आवश्यक देखिन्छ । अहिले देखिनै नेपालले नारायणलाई तयार पार्नतर्फ ध्यान दिने हो भने टि२० विश्वकप त्यति टाढा र कठिन देखिदैन ।
त्यसको लागि नारायणले पनि अहिलेको भन्दा उत्कृष्ट र कडा मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । छनोट समिति र क्यानले पनि नारायण जस्ता युवा खेलाडी तयार पार्नमा विशेष ध्यान दिन सकेमात्र टि२० विश्वकप पूरा हुनसक्छ । नारायण टि२० मात्र नभएर एकदिवसियको लागि पनि त्यतिनै उपयोगी क्रिकेटर हुन् ।